SFP + Umzi-mveliso weBIDI | China SFP + BIDI Abavelisi, abaXhasi
I-10Gb / s SFP + 1270nm / 1330nm 10km DDM DFB LC i-transceiver ebonakalayo
I-10Gb / s SFP + BIDI yenzelwe ukusetyenziswa kumakhonkco e-10GBASE-BX Ethernet. Ziyathobelana ne-SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-LR / LW, SFF-8472 kunye ne-SFP + MSA, FCC 47 CFR Icandelo 15, iCandelo B, kunye neTelcordia GR-468-CORE. I-transceiver ebonakalayo iyahambelana neemfuno zeRoHS.
I-10Gb / s SFP + 1270nm / 1330nm 20km DDM DFB LC i-transceiver ebonakalayo
I-TM-4DDDG / GD-243E ye-bi-directional 10Gb / s (SFP +) i-transceivers iyahambelana ne-SFP + ye-Multi-Source Agreement (MSA). Zithobela i-10GBASE-LR / LW Ethernet, i-SONET OC-192 / SDH kunye ne-10G yeFiber Channel 1200-SM-LL-L.
I-transceiver ebonakalayo iyahambelana neemfuno zeRoHS.
10Gb / s SFP + 1270nm / 1330nm 40km DDM DFB LC transceiver ebonakalayo
I-10Gb / s SFP + BIDI yenzelwe ukusetyenziswa kumakhonkco e-10GBASE-BX Ethernet. Ziyathobelana ne-SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-ER / EW, SFF-8472 kunye ne-SFP + MSA, FCC 47 CFR Icandelo 15, iCandelo B, kunye neTelcordia GR-468-CORE. I-transceiver ebonakalayo iyahambelana neemfuno zeRoHS.
10Gb / s SFP + 1490nm / 1550nm 80kmm DDM EML LC transceiver ebonakalayo
I-10Gb / s SFP + BIDI yenzelwe ukusetyenziswa kwiikhonkco ze-10GBASE Ethernet, ishaneli yefayibha kunye nesicelo seWDM. Ziyathobelana ne-SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-ER / EW, SFF-8472 kunye ne-SFP + MSA, FCC 47 CFR Icandelo 15, iCandelo B, kunye neTelcordia GR-468-CORE. I-transceiver ebonakalayo iyahambelana neemfuno zeRoHS.